Filoham-pirenena tanzaniana: mpiaro ny fizahan-tany voalohany eto Afrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Filoham-pirenena tanzaniana: mpiaro ny fizahan-tany voalohany eto Afrika
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanao fampielezan-kevitra hampiharihary ny fizahantany any Tanzania manerana an'izao tontolo izao ny filoham-pirenena Tanzania Samia Suluhu Hassan dia mitety ny faritra fizaran-tany avaratry ny fizahan-tany, mitarika ny fitifirana horonantsary fanadihadiana eo amin'ny toerana manintona sy manintona.
Hisokatra any Etazonia ity fanadihadiana ity rehefa vita izany, mikendry ny hivarotra sy mampiseho ireo toerana manintona mpizahatany Tanzania manerantany.
Nilaza ny filoha Samia fa ny horonantsary fanadihadiana an'ny Royal Tour dia hampiseho fizahantany, fampiasam-bola, zava-kanto ary zava-manintona ara-kolotsaina misy ary tazana any Tanzania.
Faly ireo mpilalao fototra amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.
Taorian'ny nandefasana ny fanadihadiana momba ny sarimihetsika Royal Tour tao amin'ny Nosy Spice Zanzibar tamin'ny faran'ny volana Aogositra, ny Filoham-pirenena tanzaniana nanao dia an-tsarimihetsika mpanao fizahan-tany hafa toy izany tao amin'ny tanàna manan-tantara ao Bagamoyo, amoron'ny Ranomasimbe Indianina. Ny tanàna fizahan-tany Bagamoyo izay manan-tantara dia 75 kilometatra miala an'i Dar es Salaam, renivohitra ara-barotra ao Tanzania.
Tanàna fivarotana andevo taloha, Bagamoyo no toerana nidirana voalohany ho an'ny misiônera kristiana avy tany Eropa tokony ho 150 taona lasa izay, nahatonga ity tanàna kely manan-tantara ity ho varavaran'ny finoana kristiana any Afrika Atsinanana sy Afrika Afovoany.
Tamin'ny 4 martsa 1868 dia nomena sombin-tany ny Papa Fanahy Masina Katolika hananganana fiangonana sy monasiteran'ny mpitondra ao Bagamoyo eo ambany baiko avy amin'ny Sultan of Oman izay mpanapaka an'i Zanzibar.
Ny iraka katolika voalohany tany Afrika Atsinanana dia niorina tao Bagamoyo taorian'ny fifampiraharahana nahomby teo amin'ny misiônera kristiana voalohany sy ny solontenan'ny Sultan Said El-Majid, ny Sultan Barghash. Ireto mpitarika malaza roa ireto dia ny mpitondra tany Tanzania ankehitriny.
Niorina tamin'ny 1870 ny iraka Bagamoyo mba hipetrahan'ny ankizy avotra amin'ny fanandevozana saingy nitarina tany am-piangonana katolika, sekoly, atrikasa teknika ary tetik'asa fambolena.
Jiro, fakan-tsary, hetsika!
Ny fanadihadiana nataon'ny filoha Samia Suluhu Hassan dia natao hampiroboroboana ireo toerana fizahan-tany mpizahatany ao Tanzania ho an'ny mpihaino manerantany mba hampahafantatra ny momba ny dia an-tany taorian'ny nanimba ny toekarena manerantany noho ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19.
“Ny ataoko dia ny fampiroboroboana ny firenentsika Tanzania eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Handeha amin'ireo toerana manintona sary mihetsika izahay. Ny mpamatsy vola mety hahita dia hahita ny fomba tena itovizan'ny Tanzania, ny sehatry ny fampiasam-bola, ary ny toerana fisarihana samihafa, ”hoy i Samia nanampy.
Ny filoha tanzaniana dia mitarika ny ekipa mpanao sary ao amin'ny Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) sy ny Serengeti National Park taorian'ny nanaovany izany teo amin'ny Mount Kilimanjaro, ilay tendrombohitra avo indrindra any Afrika.
Na i Ngorongoro na i Serengeti dia valan-javaboary manan-karena indrindra any Tanzania izay misarika mpizahatany isam-paritra sy iraisam-pirenena an'arivony isan-taona. Ireto zaridaina mpizahatany roa ireto dia isaina ho toerana be mpitsidika indrindra any Afrika Atsinanana, indrindra fa ireo turista safari dia.
Ny Area Conservation Ngorongoro dia nambara fa tranokalan'ny UNESCO World Heritage tamin'ny 1979 noho ny lazany sy ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana sy ny tantaran'ny olombelona nosoratan'ny mpahay siansa isan-karazany taorian'ny nahitan'ny mpikaroka antropolojika malaza Mary sy Louis Leakey ny karandohan'ny Early Man tao Olduvai Gorge.
Ny zava-manintona lehibe indrindra amin'ny faritra Conservation Ngorongoro dia ilay fahagagana eran'izao tontolo izao - Ngorongoro Crater. Ity no kaldera volkano lehibe indrindra tsy misy mirandrana sy tsy tapaka eto an-tany niforona teo anelanelan'ny 2 sy 3 tapitrisa taona lasa izay, raha nisy volkano goavambe nipoaka ka nirodana ho azy. Ilay vava volkano, izay toerana mahatafiditra mpizahatany ankehitriny ary andriamby ho an'ireo mpizahatany manerantany, dia raisina ho toeram-piarovana voajanahary ho an'ny bibidia monina eo ambanin'ny rindriny 2000 metatra metatra izay manasaraka azy amin'ny sisa amin'ny faritra fitehirizana.
Valan-javaboary Serengeti dia malaza amin'ny fifantohan'ny bibidia, ny manintona indrindra dia ny Great Wildebeest Migration eny amin'ny lemaka ivoahany, mandefa wildebeest mihoatra ny 2 tapitrisa ho fialan-tsasatra voajanahary ao Maasai Mara. Ny valan-javaboary Serengeti dia iray amin'ireo valan-javaboary safari antitra indrindra atsy Afrika amin'ny fiompiana biby dia, ny ankamaroan'ny biby mampinono afrikanina.
Ny Great Migration dia misy andiam-biby goavam-be izay mahatratra 2 ka hatramin'ny 3 tapitrisa wildebeest, zebra ary gazela mihetsika ao amin'ny fihodinana famantaranandro 800 kilometatra mamakivaky ny tontolo iainana Serengeti sy Maasai Mara mitady ny kijana tsara indrindra sy ny fahazoana rano. Ireto mpiandry omby ireto dia arahin'ny liona sy mpiremby hafa an'arivony, ary miandry am-paharetana izy ireo amin'ny voay ao amin'ny Reniranon'i Mara sy Grumeti rehefa manaraka ny kompà ao anatiny ireo omby.
Namboarina tamin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny maoderina, Bagamoyo dia paradisa fialantsasatra haingana any amin'ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina aorian'ny Zanzibar, Malindi, ary Lamu.